၁။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေမှ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနတွင်အောက်ပါပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူခြင်းတို့အတွက် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါပေးသွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
(က) မော်တော်ယာဉ်များတွင်တပ်ဆင်အသုံးပြုရသောရောင်ပြန်ပြား (၅) မျိုး
RTAD Tender2(31.10.2018).pdf
Fri, 2018-12-28 16:30
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေမှ အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပေးသွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
(က) Multi Stage Test Lane for Car, Truck and Bus (2) No.
(Brand Name: MAHA, Country of Origin: Germany)
(ခ) Multi Test Lane for Motorcycle (4) No.
RTAD Tender 1 (31.10.2018).pdf
Open Tender No.13 to 22
Tue, 2018-11-27 14:30
Open Tender No.13 to 22.docx
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး(ပဲခူး) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
Wed, 2018-11-28 16:30
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး(ပဲခူး)ပိုင်၊ ဥဿာမြို့သစ်အမှတ် ( ၈ ) ရပ်ကွက်၊မြေတိုင်းရပ်ကွက် ( ၂၃ ) အတွင်း ယာဉ်စစ်ဆေးရေး အဆောက်အဦသို့ ( ၁၀'-၀'' x ၂၀'- ၀'' ) အဝင်လမ်းတံတား နှင့် ဝင်းအတွင်းပတ်လည် ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း ( ၉၃'- ၀'' x ၂၀'- ၀'' x ၀'- ၈'' ထု )၊ ( ၁၆၆'- ၀'' x ၂၁၀'- ၀'' x ၀' - ၈'' ထု )၊ ခြံစည်းရိုးသံပန်းထိုးတံခါးနှင့် ၁၀' ( ၂ ) ခန်း အုတ်နံရံစီခြင်းလုပ်ငန်းကို ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်‌ခေါ်အပ်ပါသည်။
Mon, 2018-10-22 12:15
(၁) ခရီးသည် ပို့ဆောင်ရေးဌာနခွဲ(မန္တလေး)ရှိ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းအဆောက်အဦ (အလျား ၁၂၀’×အနံ ၅၀’× အမြင့် ၁၆’)(သံထည်) အဆောက်အဦ(၁)လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် ယာဉ်ရပ်နားစခန်း(၁:၂:၄) ကွန်ကရစ် ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း
(၂) ကုန်စည်ပို့ ဆောင်ရေးဌာနခွဲ(ပြည်)၏ ရှေ့တန်းစခန်း(ပန်းတောင်း)ရှိ ယာဉ်အမောင်းသင် လေ့ကျင့်ကွင်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း
(၃) ကုန်စည်ပို့ ဆောင်ရေးဌာနခွဲ(ဟင်္သာတ)၏ရှေ့တန်းစခန်း(အထောင်)ရှိ ယာဉ်ရပ်နားစခန်း အဆောက် အဦ (အလျား ၄၅’×အနံ ၅၀’× အမြင့် ၁၆’)(သံထည်) အဆောက်အဦ (၁)လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် အဝင်/ အထွက် လမ်းကွန်ကရစ်လောင်းခြင်းလုပ်ငန်း
Tender Mdy khapa.jpg
ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူထားခဲ့ရာ တင်ဒါဖွင့်မည့် (၇.၁၁.၂၀၁၈)ရက်နေ့သည် ဒီပါဝလီနေ့ ဖြစ်သဖြင့် ရုံးပိတ်ရက်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါသဖြင့် အဆိုပါနေ့ရက်အစား တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်ကို (၆.၁၁.၂၀၁၈)ရက်နေ့ (၁၀:၀၀) နာရီသို့ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပါသည်။
Open Tender No.09 to 12
Open Tender No.09 to 12.jpg
Tue, 2018-11-13 14:00